बिहान र बेलुकी पख चिसो किन ? « Tulsipur Khabar
बिहान र बेलुकी पख चिसो किन ?
तुलसीपुर, माघ ११ ।
दिउँसो घाम लागेपनि बिहान र बेलुकी पख चिसो छ । राती आकाश खुलेको तथा उत्तरपश्चिम हिमालबाट हावा आएकाले अधिकतम तापक्रम घट्दा चिसो बढेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् वरुण पौडेलले बताउनुभयो । यस्तै हिमालबाट बहेको हावा र न्यूनतम तापक्रम बढे पनि अधिकतम तापक्रम घट्दा चिसो भएको उहाँले बताउनुभयो ।
बिहीबारको भन्दा शुक्रबार झण्डै तीन डिग्री घटेर काठमाण्डौको अधिकतम तापक्रम १५ दशमलव ७ डिग्री सेल्सियसमा झरेको मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । बिहीबार काठमाण्डौको अधिकतम तापक्रम १८ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो ।
यसैगरी दाङमा अस्तिको भन्दा ७ डिग्री सेल्सियसले अधिकतम तापक्रम घटेको छ । दाङको शुक्रबारको तापक्रम १४ दशमलव ७ डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ । यसैगरी जनकपुर, विराटनगर, धरान, पोखरा, लुम्ले, जीरी आसपासका ठाउँको अधिकतम तापक्रम ३ डिग्री सेल्सियससम्म घटेको महाशाखाले जनाएको छ । तर जुम्ला, डढेलधुरा, धनगढी, नेपालगन्ज, दिपायल, भैरहवा, धनकुटा, ताप्लेजुङको अधिकतम तापक्रम भने बिहीबारको भन्दा शुक्रबार बढेको छ ।
बिहीबार ११ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको जुम्लाको तापक्रम शुक्रबार ५ डिग्रीले बढेर अधिकतम तापक्रम १७ दशमलव १ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । यस्तै शनिबार पनि केही ठाउँको अधिकतम तापक्रम घटबढ हुने मौसमविद् वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार शनिबार पहाडी क्षेत्रको मौसम एकैछिन खुल्दै बादल लाग्नेछ भने पश्चिम तराईमा लागेको कुहिरो दिउँसोपछि मात्रै हट्ने भएकाले चिसो रहिरहनेछ । अन्य ठाउँको मौसम भने सामान्यतया सफा नै रहने मौसमविद् पौडेलले बताउनुभयो ।